Ride Koowheel Electric skeidgareeyo in meel kasta tagaan - Jomo Technology Co., Ltd
Ride Koowheel Electric skeidgareeyo in meel kasta tagaan
In la soomo casriga ah ee nolosha, waayo inta badan collar cad, nashaadyada bannaanka farxad wanaagsan isbuucaan. Halkan yimaado su'aasha ah: sida ay u heli karaan in ay meesha ku heshiisay? KOOWHEEL Electric skeidgareeyo noqon doonaa doorasho fiican, kuwa dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha moodada. Waxaa loola jeedaa in iyaga oo aan haysan si ay u xanuunsado tan iyo saxmadda baabuurta by qaadashada bas magaalada, xataa ka fog dhulka hoostiisa ka buuxo. kuwa dadka dhalinyarada neceb in. Haddii aad doorato mooto skeidgareeyo, aad ku raaxaysan karaan fasaxa aad cajiib ah oo aad samaysid waxa aad xiisaynayso. Sida fuulaan, Play badminton xitaa qaado strawberries. Ma aha oo kaliya ku riyaaqay isbuucaan a faraxsan, laakiin wanaajiyey xidhiidhka la saaxiibo. Sidaas daraaddeed, Ride Koowheel Electric skeidgareeyo noqon doono doorashada ugu saxsan. Waa maxay sababta aad doorato doonaa Koowheel E-skeidgareeyo ?
Marka hore, waa ugu awoodi karo skeidgareeyo korontada la pack ah batteriga si fudud loo badeli karo. Waxa uu si gaar ah loogu tala galay la brushless, in-wheel matoorrada xarun dual,Bluetooth hago wireless iyo 7 layers of Maple Canadian raagaya xidhaan dabacsanaan. Its xawaaraha ugu sareeya waa 40km / h oo wuxuu ku raaxaysan xoriyad ah in meel kasta oo magaalada aad doorato oo aan fuuqsata gaaska ama dhidid ka socda oo dhan ama baaskiilka. Xitaa aanad gelin karaa bac iyo qaado si ay meel kasta, ha hawlaha dibadda oo keliya ama guriga kafeega ah.
The Koowheel skeidgareeyo korontada waxaa la abuuray oo leh Fikirka ku fudud in qof kasta waa in ay awoodaan in ay ku raaxaystaan nolasha technology abuurta. Waxaan u malayn maayo in lagu skeidgareeyo korontada waa uun toy ah a geeks yar. In mustaqbalka, waxa ay noqon doontaa calaamad cusub foom kale oo gaadiid. Waa gaari tamarta-badbaadinta ah. Hubaal doorasho cusub oo muddada gaaban jeebkayga, tegayaa fasalka, supermarket iyo helitaanka iyo aadista? Maxay noqon karaan waxa ka badan yaab leh ka badan ay awoodaan in ay si xor ah u safraan magaaladii ku wareegsan? Waa sahlan tahay in la raaco ka badan skeidgareeyo joogto ah. Isticmaalka aalada aad leedahay in la sameeyo oo dhan waa istaag sabuuradda oo wuxuu ku raaxaysan safarka.